အိမ်ထောင်ရေးအဆိုပြုချက် - နေ့ကြီးနေ့ကြီးအတွက် သင်သုံးစွဲရန် လိုအပ်သမျှ Bezzia
သင့်အဆိုပြုချက်ကို စတိုင်လ်ကျကျ ဂုဏ်ပြုပါ။
Susana godoy | 13/01/2022 16:00 | မင်္ဂလာဆောင်
သင်၏လက်ထပ်ခြင်းကမ်းလှမ်းမှုကို ဂုဏ်ပြုခြင်းသည် ယနေ့တိုင် လိုက်နာဆဲဖြစ်သော အစဉ်အလာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုတိုကောသည် ယခင်နှင့်မတူတော့သည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲများ၏အကြိုက်ကိုအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်ငြားလည်း၊ သင်အခိုက်အတန့်ကိုစီစဉ်နိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြံဥာဏ်များစွာပေးလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ အဆိုပြုချက်ဟာ အသေးစိတ်ကျတယ်။.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကြေငြာတဲ့အခါအလွန်ထူးခြားသော အခိုက်အတန့်များ အမြဲရှိ၍ အားလုံးသည် နေ့ကြီးရက်ကြီးတွင် ကျရောက်လေ့မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော အဆင့်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လူများနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲမျှဝေလိုသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခြေလှမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အဆိုပြုချက်ကို ချန်ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
1 လက်၏အဆိုပြုချက်ကား အဘယ်နည်း
2 အဆိုပြုချက်တစ်ခုတွင် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သနည်း။
3 လင်မယားနှစ်ယောက် ဘာပေးရမလဲ။
4 မင်္ဂလာမဆောင်မီ အချိန်မည်မျှကြိုတင်၍ ပြီးမည်နည်း။
တခါတလေ အဆိုပြုချက်နဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ နည်းနည်းရှုပ်နိုင်တယ်။. စုံတွဲတစ်တွဲစီတွင် စိတ်ကူးစိတ်သန်းအချို့ရှိကြပြီး ၎င်းတို့သည် ယခင်ကကဲ့သို့ ပရိုတိုကောမဟုတ်တော့သောကြောင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ ယင်းမှစတင်၍ အိမ်ထောင်ပြုရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ဇနီးမောင်နှံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ အရေးကြီးအဆိုပြုချက်ကို ကြေငြာပြီး ပြုလုပ်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှန်ကန်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပြုချက်ကတော့ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အခမ်းအနားကျင်းပမယ့် အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ရှေးရှေးတုန်းကတော့ လက်ထပ်ဖို့ ခွင့်တောင်းတဲ့ သတို့သားက သတို့သမီးရဲ့ ဖခင်ကို ခွင့်တောင်းဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဟာ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ အဲဒီမှာ မိသားစုတွေက နောက်ဆုံးစကားရှိတယ်။ ဒီနေ့တော့ အရာအားလုံးက ပိုကောင်းလာပါပြီ။
အဲဒါက ငါတို့အတွက် ရှင်းပြီးသား မင်္ဂလာပွဲထက် သေးငယ်သော်လည်း ပါတီပွဲဖြစ်သည်။ မိဘ၊ မောင်နှမ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးသော မိသားစုများသာ သူမသည် သူ့ထံသို့ လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဧည့်သည်များ သဘောကျနှစ်သက်မည့် အိမ်တွင်းပါတီပွဲတစ်ခုကို သင်အမြဲတမ်း ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါက မင်္ဂလာပွဲနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်မနေသင့်ပါဘူး၊ ဒါမှ ပြဿနာမရှိဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စီစဉ်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင် နေရာရှိသည့်အခါ အခမ်းအနားအတွက် ပန်းများနှင့် ပန်းအိုးများဖြင့် ရိုးရှင်းပြီး ရိုမန်းတစ်နည်းဖြင့် အလှဆင်နိုင်သည်။ ထိုနည်းအတူ၊ သင်သည် ထမင်းစားသူတိုင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော မီနူးတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နေ့လယ်စာ သို့မဟုတ် ညစာအပြင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကြားတွင် လက်ဆောင်ဖလှယ်မှုများလည်း ရှိသေးသည်။
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ အချိန်မှာ လက်စွပ်က လက်စွပ်ပါတဲ့သူဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအခိုက်အတန့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားရွေးချယ်စရာများကို ချန်ထားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂန္တဝင်လက်ပတ်နာရီ သို့မဟုတ် စမတ်နာရီ၊ လက်သီးချိတ်အချို့၊ သူစုဆောင်းထားသည့် အရာဝတ္ထုအချို့စသည်တို့ သူ့အတွက်ဆိုရင် လက်ကောက်၊ လည်ဆွဲ ဒါမှမဟုတ် choker နဲ့ နားကပ် စတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ ခါးပတ် ဒါမှမဟုတ် ဖိနပ်လိုမျိုး ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက သင့်ကို အံ့သြသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတိုကောအားလုံးကို သင်ကျော်သွားနိုင်ပြီး သူ သို့မဟုတ် သူမကို အံ့အားသင့်စေမည့် အကြံဉာဏ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာမဆောင်မီ အချိန်မည်မျှကြိုတင်၍ ပြီးမည်နည်း။
မင်္ဂလာပွဲနဲ့ သိပ်မနီးဘူးလို့ မပြောခင်မှာပဲ မူရင်းတစ်ခုခုကို လုပ်ချင်ပြီး စီစဉ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျယ်ပြောပါ။သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ရန် အဆိုပြုချက်မှ4လ သို့မဟုတ်6လခန့် ကုန်ဆုံးရန်ဖြစ်သည်။. တခါတရံတွင် ပို၍ သီးခြား သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စုံတွဲတိုင်းအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ သူတို့ထဲက တော်တော်များများတောင် ဒီအချက်ကို မရွေးချယ်ကြတော့ဘဲ လက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိပေမယ့် လက်ထပ်ပွဲကို တိုက်ရိုက်သွားကြတယ်။ မင်းရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို စတိုင်လ်ကျကျ လိုချင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » မင်္ဂလာဆောင် » သင့်အဆိုပြုချက်ကို စတိုင်လ်ကျကျ ဂုဏ်ပြုပါ။
အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကုသရန် သဘာဝ ကုထုံး ၅
ဆူရီမီဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါက ဘာနဲ့လုပ်တာလဲ။